Hisorohana ny gaboraraka amin’ny fanabezana… : nivoaka ny lalàna vaovao mifehy ny sekoly tsy miankina | NewsMada
Hisorohana ny gaboraraka amin’ny fanabezana… : nivoaka ny lalàna vaovao mifehy ny sekoly tsy miankina
Hisorohana ny gaboraraka amin’ny fanabeazana ny zana-bahoaka, namoaka lalàna vaovao ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny 18 janoary lasa teo. Mikasika manokana ny fanokafana sekoly tsy miankina sy ny fahazoan-dalana hampianatra izany.
Namoaka lalàna vaovao, nivoaka ny 18 janoary (arrêté N°1032/2017/MEN) lasa teo, ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena amin’ny alalan’ny Ofisim-pirenna misahana ny fampianarana tsy miankina amin’ny fanjakana (Onep). Voalaza fa misy ny fepetra vaovao tsy maintsy arahin’ny mpangataka mialoha ny fanomezana fahazoan-dalana hisokatra ho an’ny sekoly tsy miankina sy ny fahazoan-dalana hampianatra ao anatin’izany sekoly izany.
Ho an’ireo maniry ny hampianatra, tsy maintsy manana « certificat » na taratasy fanamarinana momba ny fampiofanana pedagojika izy, ankoatra ny mari-pahaizana (diplaoma) takina, araka ny lalàna efa manan-kery hatramin’izay. Homena io taratasy fanamarinana io avokoa ny olona nanaraka fiofanana teny anivon’ny ivontoeram-panofanana miankina amin’ny fanjakana na miahy tena ankatoavin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Aterina mialoha ny taratasy fangatahana fisokafana
« Ho an’ny fanokafana sekoly tsy miankina vaovao, tsy maintsy manana taratasy fanamarinana momba ny fampiofanana pedagojika hitantana sekoly ny tale na tomponandraikitra voalohany ao aminy. Raha mangataka ny hanokatra sekoly hatramin’ny ambaratonga fahatelo (hatramin’ny kilasy famaranana) ny tomponandraikitra iray, tokony ho eo am-pelatanany ny « certificat » karazany telo, ho an’ny ambaratonga tsirairay », araka ny fanazavan’ny talen’ny Onep, Randrianantoandro Hanitra Fara. Voafaritry ny lalàna koa fa mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe aorian’ny fifaranan’ny taom-pianarana no homena ny fahazoan-dalana hanokatra sekoly tsy miankina iray. Aterina mialoha mandritra ny fialan-tsasatry ny Paska ny antontan-taratasy rehetra fangatahana. Amin’izay fotoana izay, afaka mandray mpianatra avy hatrany ilay sekoly amin’ny taom-pianarana vaovao raha nankatoavin’ny tomponandraikitry ny minisitera ny antontan-taratasy fangatahany hisokatra.
Tsy mampiomana ny mpanara-maso
Manamafy ity tale ity fa ho mafy ny fanaraha-maso ny sekoly tsy manara-dalàna manomboka izao, ho hentitra ny fampiharana sazy, araka ny lalàna manan-kery. Hojerena eny ifotony ny toeram-pampianarana rehetra sy ny fizotry ny fampianarana. Mety tsy hampilaza mialoha ny mpanara-mason’ny minisitera fa hirotsaka tampoka eny amin’ny sekoly samihafa. Maniry hoatra ny anana, hoy ny fomba fiteny, ny sekoly tsy miankina miorina amin’izao fotoana izao ka fotoana izao handraisan’ny tomponandraikitra fepetra hentitra manoloana izany.